Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" iza nezinhlelo zokusebenza ezivela eGnome 40, Wayland nokuningi | Kusuka kuLinux
Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" iza nezinhlelo zokusebenza ezivela eGnome 40, Wayland nokuningi
Iviki eledlule Ukukhishwa kwe-Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" kumenyezelwe, okuhlukaniswa ngokuthi inguqulo yesikhashana, okwenziwa izibuyekezo zazo ezinyangeni eziyi-9 (ukwesekwa kuzokwenziwa kuze kube nguJanuwari 2022).
Le nguqulo entsha ye-Ubuntu 21.04 kufaka phakathi izinguquko eziningi ezibaluleke kakhulu eziqala ukusetha inkambo ethathwa yenguqulo elandelayo ye-LTS yohlelo futhi ngukuthi yize le nguqulo ingazange ifake i-GNOME 40 uma singathola izici eziningi ezintsha.
1 Izici ezintsha eziyinhloko ze-Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo"
2 Landa bese uthola Ubuntu 21.04
Izici ezintsha eziyinhloko ze-Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo"
Le nguqulo entsha ye-Ubuntu ifika ne-GNOME Shell 3.38 isebenzisa i-GTK3, kodwa usebenzisa i-GNOME 40 application, ngaphandle kwalokhoI-Linux kernel ibuyekezelwe inguqulo 5.11, okubandakanya ukusekelwa kwamakhompiyutha we-Intel SGX, indlela entsha yokunqanda izingcingo zesistimu, ibhasi losizo elibonakalayo, evimbela ukuhlanganiswa kwamamojula ngaphandle kweMODULE_LICENSE (), ukuhlunga okusheshayo kwezingcingo zohlelo ku-seccomp, ukunqanyulwa kokusekelwa kwezakhiwo ze-ia64, ukudluliswa kusuka kubuchwepheshe be-WiMAX ukwenza "isiteji" segatsha, amandla okufaka i-SCTP ku-UDP.
Ohlangothini lokubukeka, singakuthola lokho kuhlongozwe itimu entsha emnyama ye-YaruNgaphezu kwalokho, izithonjana zivuselelwe ukukhomba izinhlobo zamafayela.
Futhi imodeli yokufinyelela yomkhombandlela wasekhaya ishintshiwe wabasebenzisi ohlelweni; izinkomba zasekhaya sezenziwe manje ngezimvume ezingama-750 (drwxr-x -), enikeza ukufinyelela enkombeni kuphela kumnikazi namalungu eqembu.
Kudeskithophu, singathola ifayela le- ikhono lokuhambisa izinsiza kusuka kuzinhlelo zokusebenza usebenzisa indlela yokudonsa nokudonsa futhi kuzilungiselelo, manje ungashintsha iphrofayili yokusebenzisa amandla.
Ukuhlanganiswa kwesiqondisi esisebenzayo kuthuthukile kanye namandla okuqinisekisa abasebenzisi ku-Active Directory nge-GPO (Group Policy Objects) ukwesekwa kwanikezwa ngokushesha ngemuva kokufaka Ubuntu.
Abaphathi bangaphatha izindawo zokusebenza ze-Ubuntu ngokusingathwa kwamasethingi kusilawuli sesizinda se-Active Directory, kufaka phakathi izilungiselelo zedeskithophu kanye neqoqo lezinhlelo zokusebenza eziphakanyisiwe. I-GPO ingasetshenziselwa ukuchaza izinqubomgomo zokuphepha zawo wonke amaklayenti axhunyiwe, kufaka phakathi ukumisa imingcele yokufinyelela komsebenzisi nemithetho yokubhalisa amaphasiwedi.
Okunye okusha okuvelele ukuthi kungeziwe Ukusekelwa kwePipewire Media Server ukunika amandla ukurekhoda kwesikrini, ukuthuthukisa ukusekelwa komsindo kuzinhlelo zokusebenza ze-sandbox, ukuhlinzeka ngamakhono wokucubungula umsindo, ukuqeda ukuhlukaniswa, nokuhlanganisa ingqalasizinda yomsindo yezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene.
Isifaki sengeze ukusekelwa kokwakha okhiye bokugcina ukubuyisela ukufinyelela kumahlukanisi abetheliwe, engasetshenziswa ukubhala ngemfihlo uma iphasiwedi ilahlekile, kanye nokusekelwa okuthuthukisiwe kwe-UEFI SecureBoot ku-x86_64 (amd64) kanye nezinhlelo ze-AArch64 (arm64) nazo ziyagqanyiswa.
Isendlalelo sokuhlela i-boot esiqinisekisiwe sidluliselwe ekusetshenzisweni kwe-SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), exazulula izinkinga ngokususwa kwesitifiketi. Ukuxhaswa kwe-SBAT kungezwe kumaphakeji we-grub2, shim, ne-fwupd. I-SBAT ifaka ukungeza imethadatha entsha, esayinwe ngamadijithi futhi ingafakwa kuhlu lwezinto ezivunyelwe noma ezingavunyelwe ze-UEFI Secure Boot.
Mayelana nokuhlanganiswa kwe- I-Raspberry Pi, kule nguqulo entsha ye-Ubuntu 21.04, ukuxhaswa kweWayland kufakiwe. Ukuxhaswa kwe-GPIO kungeziwe (nge-libgpiod ne-liblgpio). I-Compute Module 4 board manje isekela i-Wi-Fi ne-Bluetooth.
Futhi kule nguqulo entsha ye Ubuntu 21.04 kudeskithophu, ngokuzenzakalela, iseshini esekwe kuphrothokholi yeWayland inikwe amandla. Uma usebenzisa abashayeli be-NVIDIA abaphethe, ngokuzenzakalela, njengakuqala, kunikezwa iseshini esekwe kuseva ye-X, kepha kokunye ukumiswa kwalesi seshini kudluliselwa esigabeni sezinketho.
Kuyaziwa ukuthi imikhawulo eminingi yeseshini ye-GNOME eWayland isanda kususwa, ekhonjwe njengezinkinga ezivimbela inguquko eya eWayland. Isibonelo, manje kungenzeka ukuthi wabelane nge-desktop usebenzisa i-Pipewire media server.
Landa bese uthola Ubuntu 21.04
Ekugcineni, kulabo abafuna ukulanda nokufaka le nguqulo ye-Ubuntu kumakhompyutha abo noma bakwazi ukuyihlola ngomshini obonakalayo, Kufanele balande isithombe sesistimu kuwebhusayithi esemthethweni yohlelo.
Lokhu kungenziwa kusuka ku- isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" iza nezinhlelo zokusebenza ezivela eGnome 40, Wayland nokuningi
Ithimba le-University of Minnesota lichaze isisusa sokuzama nge-Linux kernel